Fandraisan'anjaran'i Lalamasaka - Wikipedia
Pour Lalamasaka dinika Laogim-panakanana fampidiram-pejy laogy laogiim-panararaotana
18 Oktobra 2019 à 04:20 Fampitahana tant. +179‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Rohy iraisana Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
8 Oktobra 2019 à 22:38 Fampitahana tant. +95‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Loharano sy fanamarihana Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
8 Oktobra 2019 à 22:18 Fampitahana tant. +6‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Lalamasaka hatry ny ela Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
8 Oktobra 2019 à 22:17 Fampitahana tant. -5‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Lalamasaka hatry ny ela Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
22 Septambra 2019 à 20:40 Fampitahana tant. -24‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Rohy iraisana Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
22 Septambra 2019 à 20:40 Fampitahana tant. +5‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Lalamasaka hatry ny ela Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
22 Septambra 2019 à 20:37 Fampitahana tant. -1‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Loharano sy fanamarihana Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
22 Septambra 2019 à 20:33 Fampitahana tant. -1‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Lalamasaka hatry ny ela Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
22 Septambra 2019 à 20:32 Fampitahana tant. +27‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ →‎Rohy iraisana Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
29 Jolay 2019 à 07:58 Fampitahana tant. +14‎ Dinika:Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎
5 Jolay 2019 à 05:17 Fampitahana tant. -1‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
5 Jolay 2019 à 05:16 Fampitahana tant. -189‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
5 Jolay 2019 à 05:13 Fampitahana tant. +225‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
5 Jolay 2019 à 05:03 Fampitahana tant. +189‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 18:46 Fampitahana tant. +172‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 18:37 Fampitahana tant. +88‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 18:30 Fampitahana tant. +119‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 18:20 Fampitahana tant. +82‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 15:08 Fampitahana tant. -4‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 15:06 Fampitahana tant. +487‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 14:01 Fampitahana tant. +523‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 13:32 Fampitahana tant. +19‎ Fiangonana zandriny ‎ →‎Jereo koa Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
2 Jolay 2019 à 13:26 Fampitahana tant. -56‎ Fiangonana zandriny ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
27 Jiona 2019 à 20:18 Fampitahana tant. +829‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
14 Jiona 2019 à 09:54 Fampitahana tant. +96‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
14 Jiona 2019 à 08:54 Fampitahana tant. +256‎ V Dinika:Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Pejy voaforona amin'ny « Raha manana tantara voamarina tsara ianao momba ny fiandohan'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy dia azonao alefa aminay izany mba ahafahanay mandrafitra izany : Mailaka : l... »
13 Jiona 2019 à 14:25 Fampitahana tant. +212‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
13 Jiona 2019 à 14:11 Fampitahana tant. -1‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
13 Jiona 2019 à 14:10 Fampitahana tant. +430‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
13 Jiona 2019 à 02:04 Fampitahana tant. +104‎ V Fanoroana:Mampiditra sary ‎ Pejy voaforona amin'ny « centré|vignette|[[Www.lalamasaka.com|Lalamasaka Hatry ny Ela]] » ankehitriny Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
13 Jiona 2019 à 01:57 Fampitahana tant. +23‎ V Fanoroana:Loharano ‎ Pejy voaforona amin'ny « Lalamasaka Hatry ny Ela » ankehitriny Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
13 Jiona 2019 à 01:53 Fampitahana tant. +620‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
13 Jiona 2019 à 00:56 Fampitahana tant. +3 501‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy ‎ Fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara. Ny momba azy. Ny tantarany Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso PHP7
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:Fandraisan%27anjara/Lalamasaka"